I-Apple eMac kunye neMicrosoft XBox? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 8, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kubonakala ngathi ngumhla ofanelekileyo wokuba oku kwenzeke. Ngosuku iApple ekhupha ifayile ye iMac -Ikhompyuter entle, umhlobo wosapho wasinika umzala wakhe omdala, i-eMac. I-eMac yeyona CRT Inguqulelo yeMac. Ijongeka ngathi yinto engekhoyo Ngo-2001 i-Space Odyssey -Ndicinga ukuba sisiqwenga sobugcisa kunekhompyuter.
Ikhompyuter encinci (enkulu) entle, nangona! Ndiyachukumiseka. Siza kuyiphucula ibe yi-512Mb ye-RAM kwaye sifumane indawo yokuyibonisa ngaphandle. Ikhaya lam likhawuleza ukuba yimyuziyam yeApple- ineAppleTV, isibini sePod Shuffles, iG3, iG4, iMac neMacBookPro. Yikes. (I-G3 kunye ne-G4 azikabikho kwaye ziyaqhuba okwangoku).
Elinye lamaqhekeza alahlekileyo kwi-eMac kukukwazi ukongeza iKhadi leNethiwekhi elingenantambo. U-Apple wathengisa ii-AirPorts ngelo xesha kwaye unokunxibelelana nabo nge-Ethernet Cable. Basenazo ii-AirPorts ngoku, kodwa ngokwenyani umoya weDew Mountain - zii-AirPort Extremes- ziqhuba ezona zibalaseleyo kunye nezona zikhulu nge-802.11g. Sele ndinenethiwekhi enkulu engenazingcingo yeNetgear ngenxa yoko andifuni ukuphucula okwangoku.
Kwenziwe ntoni!? Umntu ngaphandle kweAirPort angaya njani afumane eli rhamncwa kwi-Intanethi? Unyana wam weza nempendulo enobuchule kulo mbuzo. Waya wayokuthatha iXBox engenantambo yeyunithi esingayisebenzisiyo wayicofa ngentambo… Voila! Ayisiyonto ngaphandle kwebhulorho ye-ethernet engenazingcingo ye-XBox yokuqhakamshelana nenethiwekhi-into enye ebesizama ukuyenza nge-eMac.
Yasebenza! Nantsi i umfanekiso wethu uhambisa imovie nge-XBox ibhetri engenantambo ye-ethernet.
Hayi, asizukugcina izinto ngale ndlela. Ukuxuba iMac kunye neMicrosoft kuziva kungcolile kum (nangona ndiyenza kakhulu!). Umhlobo wam olungileyo, uBill, wayenebhulorho ye-ethernet engenazingcingo ye-Linksys WET11 endiyilungiselele kwaye ndavuka ngokuhlwanje. Iyunithi ye-XBox engenazingcingo ibuyela kumnini wayo olungileyo… I-XBox.
Ndiza kufuna igumbi lomncedisi kungekudala.
Agasti 10, 2007 kwi-9: 43 AM
Onjani wona ukuba mhle umbono! Ndiyavuya ukuba isebenzile 🙂